Omume mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ | ICD-11 | World Health Organization
Home Blog akụkọ 'Àgwà Ọjọọ Na-agwụ Ike' Nkewa dịka Nsogbu Ahụike Ọgụgụ Isi site Organizationtù Ahụ Ike Worldwa
adminaccount888 9th July 2018 Akụkọ kacha ọhụrụ
N'okpuru ebe a bụ ụfọdụ akwụkwọ ikike maka ndị nta akụkọ na ọha na eze gbasara ụdị nyocha ọhụụ. Nke a bụ nchịkọta ngwa ngwa na a blog.
Na 18 June 2018, ndị dere World Health Organisation nke International Classification of Diseases, 11th Ntughari, weputara nkwuputa mgbasa ozi na-ekwupụta na mmejuputa mbipute nke ICD-11 na-abịanụ dị ugbu a n'ịntanetị. Ọ gụnyere Nsogbu Ọjọọ Mmebi (CSBD) maka oge mbụ. N'agbanyeghị ntakịrị asịrị na-eduhie eduhie na nke ọzọ, ọ bụ eziokwu na WHO ajụla "ị pornụ ọgwụ ọjọọ" ma ọ bụ "mmekọahụ riri ahụ".
Akpọwo omume mmekọahụ rụrụ arụ site na aha dị iche iche kemgbe ọtụtụ afọ: "ịkwa iko", "ị addictionụ ọgwụ ọjọọ", "ị addictionụ ọgwụ ọjọọ", "omume mmekọahụ na-enweghị nchịkwa" na ihe ndị ọzọ. N'ime akwụkwọ ndekọ aha ya kachasị ọhụrụ WHO na-ewepụ ụkwụ iji kwado ọrịa a site na ịnakwere "Nsogbu Ọjọọ Mmebi" (CSBD) dịka ọrịa ọgụgụ isi. Dị ka ọkachamara WHO bụ́ Geoffrey Reed si kwuo, nchọpụta CSBD ọhụrụ ahụ “na-eme ka ndị mmadụ mara na ha nwere“ ezigbo ọnọdụ ”ma nwee ike ịchọ ọgwụgwọ.”
E nwere ike ịhụ ntọala Press na saịtị WHO Ebe a. Maka mma, anyị emegharịghachiri ya n'okpuru.
Ihe ngosi nke ICD-11 na-ekwu banyere mgbakwunye nke ịgba egwu dịka nsogbu ahụike uche, na otu a na-esi edozi ụbụrụ nwoke.
Ọ na-eme ọ bụghị aha nyocha ọzọ ọhụụ ọzọ: "Mkparịta ụka mmekọahụ na-agụsi ike"Nke na-egosi na" Nsogbu nchịkwa nke mkpali ".
The "Ihe edeturu ntọhapụ”N'okpuru nyocha ọ bụla na-agụnye nkwupụta a: "Usoro nhazi nke ICD-11 MMS bụ ihe siri ike."
Nke a bụ ederede ikpeazụ nke nchoputa "Mkparịta ụka na-akpata mmekọahụ rụrụ arụ":
Mkparịta ụka na-eme ka mmadụ nwee mmekọahụ rụrụ arụ [6C72], n'ikpeazụ enye ndị ọkachamara ahụike ọgwụgwọ, nchọpụta nke onwe ya nke na-enweghị ike ịchịkwa omume mmekọahụ n'agbanyeghị nhụsianya na-adịghị mma. Mmezi nke usoro iwu ọhụrụ ahụ dị iche n'ebe nile, mana ihe dị mkpa bụ na ndị ọkachamara ahụ ike ụwa ekwenyewo na omume mmekọahụ na-agwụ ike kwesịrị nyocha. Ọ bụ okwu nche anwụ sara mbara nke a pụrụ iji mee ihe maka onye ọbụla na-emezu nhazi ya. "Arụ mmekọahụ" na-ekwu na ọ bụ mmekọahụ na-eri ahụ ma ọ bụ mmekọahụ rụrụ arụ "dị ka onye ọkachamara nchọpụta bụ Jon E. Grant, JD, MD, MPH si kwuo. Ugbu a Ọrịa afọ (February 2018: p.3). Achọkwara nchọpụta CSBD ọhụrụ ahụ iji chọpụta ndị nwere ihe mgbaàmà metụtara ịntanetị siri ike.
Ihe kariri 80% nke ndi nwere mmeko nwoke na nwanyi nwere ike igosi ihe omimi ma obu nsogbu ndi ozo.
“Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike na-anọchi anya ngosipụta pụtara ìhè nke nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ (nke a na-akpọkwa dị ka mmekorita nke mmekọahụ, ị ​​sexualụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ omume mmekọahụ gabigara ókè na akwụkwọ ndị ahụ - Kafka, 2010; Karila et al., 2014; Wéry & Billieux, 2017) n'ihi na n'ọtụtụ ọmụmụ ihe kariri 80% nke ndi nwere nmeko nwoke na nwanyi ekwuputala ihe ndi ozo di egwu (Kafka, 2010; Reid et al., 2012) ”. (B et et al. 2018: 2)
Akwụkwọ ntuziaka nyocha dị ka ndị WHO Nchịkọta nke Ọrịa International nke Ọrịa (ICD-11) na American Psychiatry Association Usoro nyocha na ntule nke Mkpụrụ Ahụike (DSM-5) emela kpọọ ọnọdụ ahụike ọgụgụ isi dị ka "ọgwụ ọjọọ" kwa se. Ha na-ahọrọ iji okwu ahụ bụ "Nsogbu."
Achọpụta "ịkwa iko" na-esite n'icheghị ike ịkwa iko, agụụ mmekọahụ ma ọ bụ agbamume, na-eme ka mmeghachi omume mmekọahụ na-agbaso ogologo oge (dịka, ọnwa 6 ma ọ bụ karịa).
Ime nchoputa Nsogbu nke mmekorita nke nwoke na nwanyi
Ndị nkatọ na-echegbu onwe ha nwere nchegbu na nyocha ọ bụla a ga-eji mee ihe banyere ịkwa iko nke obere mmekọahụ na omume mmekọahụ ọzọ. Otú ọ dị, iji mezuo usoro nyocha nke CSBD, omume nsogbu ahụ ga-eme ka nhụjuanya na-adịgide adịgide ma ọ bụ mmerụ dị ukwuu na nke onwe, ezinụlọ, mmekọrịta mmadụ na ibe, agụmakwụkwọ, ọrụ, ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ dị mkpa na-arụ ọrụ. N'aka ozo, nchoputa ohuru anaghi achoputa ndi oria Kedu omume mmekọahụ na-etinye aka na ya kpamkpam. Ọ na-achọpụta ndị ọrịa na-adabere na nhụjuanya na nsogbu. Ọ bụrụ na akparamàgwà nwoke, ụdị ọ bụla ọ na-eme, apụtaghị, nchọpụta ọhụrụ ahụ agaghị emetụta ya.
Ndị nkatọ ndị ọzọ dọrọ aka ná ntị na nyocha nke CSBD nwere ike ịkpata nchoputa na-ezighị ezi site na ndị ọrịa bụ ndị omume ha, n'eziokwu, na-agba ume, na nsogbu ha bụ n'ihi ikpe ziri ezi site na ndidi ma ọ bụ ọkachamara. Iji gbochie ihe ndị dị otú ahụ, nchoputa ọhụrụ ahụ na-enye na, "Nsogbu nke metụtara kpamkpam mkpebi ikpe na nkwenye banyere ọchịchọ mmekọahụ, agbamume, ma ọ bụ àgwà adịghị ezu." N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye ọrịa aghaghị inwe ike ịchịkwa mkpali ma bụrụ na-ekere òkè n'omume mmekọahụ na-emegharị ugboro ugboro.
Arụmụka Akwụkwọ ntuziaka Diagnostic
Enweela arụmụka dị ukwuu n'ibute akwụkwọ nke ọkwa ọhụrụ na ICD-11. A na-atụle nsogbu akparamàgwà mmekọahụ (nke a na-ezo aka na omume dịka omume ọbara ọbara) maka itinye aka na DSM-5 mana n'ikpeazụ ewepụ. Dika ndi neuroscientist na-eduzi, "Ntuchi a egbochila igbochi, nyocha, na oru ogwugwu, na ndi ozo n'adighi ozo achoputa ozo maka nsogbu ndi mmadu na-agu aghara." (Potenza et al. 2017)
Maka ugbu a, ụdị ndị nne na nna nke nchọpụta CSBD ọhụrụ bụ Mmetụta Mmetụta Mmetụta, nke na-agụnye nyocha ndị dị ka Pyromania [6C70], Kleptomania [6C71] na Intermittent Explosive Disorder [6C73]. Ma obi abụọ na-anọgide na-abụ banyere ụdị dị mma. Dị ka Yale neuroscientist Marc Potenza MD PhD na Mateusz Gola PhD, onye nchọpụta na Polish Academy of Sciences na Mahadum California San Diego na-akọwa, sị, "Nkọwa nke ugbu a ịmepụta nsogbu CSB dị ka njedebe na-eme ka mkpesa bụ esemokwu dị ka ụdị ndị ọzọ nyere ... E nwere data na-atụ aro na CSB na-ekere òkè dị iche iche na ihe riri ahụ. "(Kraus et al 2018)
O nwere ike iburu n'uche na ICD-11 gụnyere nchoputa nke Nsogbu amblinggba Chaa Chaa n'okpuru nsogbu abụọ n'ihi Addgba Egwuregwu na n'okpuru Nsogbu Njikwa Mmetụta. Ya mere, nhazi nke nsogbu anaghị adị iche (B et et al. 2018: 2). Nhazi nwere ike gbanwee oge. Nsogbu nke ịgba chaa chaa bụ nke mbụ dị ka nsogbu na-akpata nsogbu na ma DSM-IV na ICD-10, mana dabere na ọganihu na nghọta siri ike, A tụgharịrị Nsogbu amblinggba chaa chaa dịka "Nsogbu metụtara Nri na Ahụ Ike" (DSM-5) na a "Nsogbu N'ihi Àgwà Ọjọọ" (ICD-11). O nwere ike ịbụ na nchoputa CSBD ọhụrụ a nwere ike ịgbaso usoro mmepe dịka Ọrịa amblinggba chaa chaa nwere.
N'agbanyeghị otu mkparịta ụka a si agbanwe n'oge, ntinye CSBD dị na ICD-11 ugbu a na-enye nnabata na mmata dị mkpa na enwere ndị chọrọ enyemaka ahụike dị mma iji nyere ha aka ịmekọrịta omume mmekọahụ ha na nsonaazụ ya. Ọ ga-akwadokwa nchọpụta dị mkpa n'ọdịnihu n'ọdịnihu banyere nsogbu mmekọahụ.
“Ọ ga-adị mkpa ịtụle otú DSM na International Classification of Diseases (ICD) si arụ ọrụ gbasara usoro nkọwa na nkewa. N'ime ime nke a, anyị chere na ọ dị mkpa ilekwasị anya na nsogbu ịgba chaa chaa (nke a makwaara dị ka ịgba chaa chaa na-adịghị mma) yana otu esi ele ya anya na DSM-IV na DSM-5 (yana ICD-10 na ICD-11 na-abịanụ). Na DSM-IV, a na-atụle ịgba chaa chaa na-enweghị nchịkwa dị ka "Ọrịa Na-achịkwa Ọchịchị Na-abụghị Ebe Ọzọ." Na DSM-5, e reclassified dị ka "umi metụtara na-eri ahụ Ọrịa." "E kwesiri itinye usoro yiri nke a na CSB, nke a na-atụle ugbu a maka nsonye dị ka nsogbu na-achịkwa mkpali na ICD-11 (Grant et al., 2014; Kraus et al., 2018) ". A na - ewepụta ihe odide ndị a Gola na Potenza 2018.
Na na na nke World Health Organization (WHO) na-agbazi nsogbu ịgba chaa chaa na CSBD dị ka ọnọdụ ahụ ike uche, a kọrọ na Guardian akwụkwọ akụkọ kwuru na ụlọ ọgwụ dị na London na-akwado ịkwalite ụlọ ọrụ ị addictionụ ọgwụ ịntanetị na-akwado nke National Health Service nke mbụ maka ndị na-eto eto na ndị okenye. Ndị na-agwọ ọrịa mmekọahụ n'ebe ndị ọzọ ahụwo mmụba nke ndị ahịa na-eto eto bụ ndị na-eji ngwa ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ebe ị na-akparịta ụka n'ịntanetị, na-enwe nsogbu ahụike ọgụgụ isi n'ihi nsonaazụ.
Dị ka Mateusz Gola PhD, onye nchọpụta na Polish Academy of Sciences na University of California San Diego si kwuo, nchọpụta CSBD ọhụrụ nwere abamuru ndị ọzọ. "Ọ na-akọwa ihe doro anya. Ọzọkwa, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ọkachamara n'ihe banyere ọzụzụ uche ga-amụzi nsogbu ahụ ugbu a. Na-enweghị nyocha nke CSBD, ọtụtụ ndị dọkịta amaghị ihe gbasara nsogbu mmekọahụ. N'ikpeazụ, nchoputa a nwere ike ime ka ọtụtụ ndị ọrịa nwee ike ịbanye na ọgwụ mkpuchi mkpuchi mkpuchi ya. "Gola kwukwara na, nyocha ọhụrụ ahụ," anaghị edozi nsogbu nke esi emeso CSBD n'ụzọ dị irè, ma ọ na-enye ohere maka ọmụmụ ihe na-aga n'ihu, nwere ike iduga na nke a na-ahazi, nke a pụrụ ịdabere na ya. "
Inwekwuwanye ohere maka ndị ọrịa
Shane W. Kraus, Ph.D. Onye na-enyere prọfesọ nke isi mgbaka na Director nke havlọ Ọgwụ Behavioral Addictions na Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hospital, Mahadum nke Massachusetts Medical School kwuru gbasara ụdị nyocha ọhụụ a: “Nke a bụ ụzọ mbụ dị mma. Nsonye nke CSBD na ICD-11 nwere ike ịbawanye ohere iji lekọta ndị ọrịa (mba ụwa na n'ime US). Na mgbakwunye, nsonye ga-abawanye ego nyocha nke elebara anya n'akụkọ ihe mere eme na ọrịa ahụike ọgụgụ isi. Na mgbakwunye, echere m na ọ ga-ebelata ihere nye ndị o metụtara ma nwekwuo agụmakwụkwọ na-eweta ọrụ n'okwu a. ”
Ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa
Ebumnuche doro anya nke ntọhapụ ICD-11 na-adịbeghị anya bụ ịhapụ ndị mba ịzụ ndị ọkachamara ahụike na nchọpụta akwụkwọ. Ndị nchọpụta agbawokwa ume ka ndị dọkịta na ndị ndụmọdụ bụrụ ndị a zụrụ azụ na iji ghọtakwuo àgwà mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ:
“Ọ dịkwa mkpa na ndị na-enye nlekọta (ya bụ, ndị ụlọ ọgwụ na ndị ndụmọdụ) ndị mmadụ nwere ike ịchọ enyemaka n’aka ndị CSB maara nke ọma. N'oge ọmụmụ anyị metụtara ihe gbasara 3,000 na-achọ ọgwụgwọ maka CSB, anyị anụla ugboro ugboro na ndị na-ata ahụhụ na CSB na-ezute ọtụtụ ihe mgbochi mgbe ha na-achọ enyemaka ma ọ bụ na ndị dọkịta na-akpakọrịta (Dhuffar & Griffiths, 2016). Ndị ọrịa na-ekwupụta na ndị dọkịta nwere ike izere isiokwu ahụ, kwupụta na nsogbu ndị dị adịghị adị, ma ọ bụ na-atụ aro na onye nwere nnukwu mmekọahụ ị ga-enwe, ọ ga-anakwere ya kama ịgwọ ya (n'agbanyeghị na maka ndị a, CSBs nwere ike iche ego-dystonic na lead na otutu ntiputa). Anyị kwenyere na njedebe ndị akọwapụtara nke ọma maka nsogbu CSB ga-akwalite mgbalị agụmakwụkwọ gụnyere mmepe mmemme ọzụzụ na otu esi achọpụta ma mesoo ndị mmadụ ihe mgbaàmà nke ọrịa CSB. Anyị na-atụ anya na ihe omume dị otú ahụ ga-abụ akụkụ nke ọzụzụ gbasara ahụike maka ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ndị ọkà mmụta uche, na ndị ọzọ na-enye nlekọta nlekọta ahụike, yana ndị nlekọta nlekọta ndị ọzọ gụnyere ndị nlekọta na-elekọta ahụ, dịka ndị dọkịta na-ahụ maka ndị ọkachamara. "(Kraus et al 2018)
The Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ bụ ọrụ ebere ọsụ ụzọ nke na-eme ka sayensị nke mmekọrịta nwoke na nwanyị na ịhụnanya nweta ọtụtụ ndị na-ege ntị. Anyị na-elekwasị anya na mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eto eto na ndị na-eto eto. Collegelọ akwụkwọ Royal nke General Practitioners na London kwadoro anyị ka anyị gaa ebe obibi ụbọchị 1 maka ndị ọkachamara na mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike na ahụike. Nke a na-akwado ebumnuche nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa nke mgbasa ozi ha n'okpuru na-emesi ike mkpa ọ dị maka ọzụzụ n'etiti ndị ọkachamara. Anyị na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ma na-enyekwa ndị nkuzi nkuzi na ọzụzụ n'oge afọ a. Anyị na-enye ndị otu chọrọ ịmepe mmemme ịmatakwu banyere ịkpa oke egwu.
Maka ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ozi ndị ọzọ gụnyere akwụkwọ zuru ezu nke isi mmalite ndị e depụtara, biko kpọtụrụ info@rewardfoundation.org.
Ederede zuru ezu nke ICD-11 Press Release.
Onye na - agbapụta Ọrịa International nke Ọrịa (ICD 11) 18 June 2018 News Release Geneva
Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa (WHO) taa na - atọhapụ Nhazi Ọhụrụ nke Ọrịa International (ICD-11).
ICD bụ ntọala maka ịchọpụta ọnọdụ ahụike na ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ, ma nwee ihe dịka 55 000 koodu pụrụ iche maka mmerụ ahụ, ọrịa na ihe kpatara ọnwụ. Ọ na-enye asụsụ nkịtị nke na-enye ndị ọkachamara ahụike ohere ịkekọrịta ozi ahụike na ụwa niile.
"ICD bụ ngwaahịa nke WHO na-anya isi," ka Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General nke WHO kwuru. "Ọ na-enyere anyị aka ịghọta ọtụtụ ihe banyere ihe na-eme ka ndị mmadụ na-arịa ọrịa ma nwụọ, na ime ihe iji gbochie nhụjuanya ma zọpụta ndụ."
ICD-11, nke karịrị afọ iri na-eme, na-enye mmụba dị ịrịba ama na nsụgharị ndị gara aga. Maka oge mbụ, ọ bụ kọmputa kpamkpam ma nwee usoro ọyị na-eji eme enyi. Enweela ike itinye aka na ndị ọrụ nlekọta ahụike ndị sonyere nzukọ na-emekọ ihe ma nyefee ha. Ndi otu ICD no n'isi ulo oru WHO anatala ihe ruru 10 000 aro maka ntughari.
ICD-11 ga-ebute ya na Mgbakọ Ahụike Ụwa na May 2019 maka ịmalite site na United States, ọ ga-abanye na 1 January 2022. Ntọhapụ a bụ mmalite ihuenyo nke ga-enye ndị obodo ohere ịhazi otu esi eji nsụgharị ọhụrụ, dozie nsụgharị, na ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụ ike na mba nile.
ICD na-ejikwa ndị na-ahụ maka ahụ ike na-agwọ ọrịa ndị reimbursements dabeere na coding ICD; ndị nlekọta ahụike nke mba; ndị ọkachamara nchịkọta data; na ndị ọzọ ndị na-akwado ọganihu na ahụike zuru ụwa ọnụ na-ekpebi oke nke ego ahụ.
ICD-11 ọhụrụ ahụ na-egosikwa ọganihu na nkà mmụta ọgwụ na ọganihu na nghọta sayensị. Dịka ọmụmaatụ, amaokwu ndị metụtara nkwụsi ike antimicrobial na-ejikọta ya na usoro nyocha nke Antimicrobial Resistance System (GLASS). ICD-11 na-enwe ike ijide data gbasara nchekwa na nlekọta ahụike, nke pụtara na ihe ndị na-adịghị mkpa bụ ndị nwere ike imerụ ahụike - dịka arụmọrụ na-adịghị ize ndụ na ụlọ ọgwụ - nwere ike ịmata ma belata.
ICD ọhụrụ ahụ na-agụnye ọhụụ ọhụrụ, otu na nkà mmụta ọdịnala: ọ bụ ezie na ọtụtụ nde mmadụ na-eji ọgwụgwọ ọdịnala n'ụwa nile, ọ dịtụbeghị nkewa na usoro a. Isi okwu ọzọ gbasara ahụike mmekọahụ na-eweta ọnọdụ ndị e meburu ụzọ n'ụzọ ndị ọzọ (dịka egosiputa nwoke na nwanyị n'ọnọdụ ọnọdụ ahụike) ma ọ bụ kọwaa ya iche. A gbakwụnye nsogbu nke egwuregwu na ngalaba nke nsogbu ịṅụ ọgwụ.
"Otu ụkpụrụ dị mkpa n'ime nchịkọta a bụ iji mee ka usoro nhazi na ngwa ngwa kọmputa dị mfe - nke a ga-enye ndị ọkachamara ahụike ahụ aka ka ha nwee ike ịkọwa ya n'ụzọ dị mfe karị," ka Dr Robert Jakob, Onye Ọchịchị Team, Nkọwapụta Nhazi na Ụkpụrụ, WHO.
Dr Lubna Alansari, onye isi nchịkwa ndị enyemaka nke WHO maka usoro ahụike na ahụike, na-ekwu, sị: "ICD bụ isi nkuku nke ozi ahụike na ICD-11 ga-enye echiche nke oge banyere ụdị ọrịa."